Imiba yamandla aseJamani EJamani, ixabiso lemarike yempahla yombane linyuke malunga ne-140% ukususela ngoJanuwari. Iingcali zikholelwa ukuba ukunyuka kwamaxabiso amandla kubangelwa ukunyuka kwamaxabiso egesi yendalo, kuba ukususela ekuqaleni konyaka, ixabiso legesi yendalo liye lanyuka nge-440%. Ukuthi ga...
Ukusetyenziswa OKUMKHULU kweNeutron III ENCINANE
ngu admin on 21-07-23
Kumfanekiso we-neutron, i-neutron kufuneka ithotywe ukuya kwisantya esifunekayo kumfanekiso emva kokuba iveliswe. ukuhlolwa kwe-welding, ukuphosa...
Usetyenziso OMKHULU lweNeutron II ENCINANE
Random free neutrons Ekubeni neutron ayikwazi ukuhlala ngaphandle nuclides ixesha elide, iineutrons simahla kufuneka iveliswe ngoko nangoko kwimeko yesicelo.Eyona ndlela ilula kukuthatha isotope, njengenxalenye chain yayo radioactive ukubola, ukuba zibonakalisa njenge neutron. radiation, ...
Ukusetyenziswa OKUMKHULU kweNeutron ENCINANE
ngu admin on 21-07-19
Uninzi lwenu mhlawumbi luyazi kancinci malunga ne-neutron, ubuncinci kwiklasi ye-physics. Nangona kunjalo, le miqadi encinci ye-quark ayigcini nje ngokuzalisa i-nuclei ye-athomu, ikwayinxalenye ebalulekileyo yokugcina uzinzo lwe- matter.Ukongezelela, i-neutrons zamahhala ziyakwazi zisetyenziswe ngezinye iindlela. Ukusuka ekuqhekezeni iiathom...
ILebhu eDityanisiweyo yeTekhnoloji yoKhuseleko lweNyukliya yeNyukliya
ngu admin nge 21-07-01
Kutshanje, iZiko leSibini leChina leNuclear Power Research and Design Institute kunye neSikolo seFiziksi yeYunivesithi yaseSichuan ngokudibeneyo babambe umsitho wokutyikitya “iLebhu eDityanisiweyo yeTekhnoloji yoKhuseleko lweNyukliya yeNyukliya”.UZhou Dingwen, ilungu leKomiti yeQela ...
IYunithi yesiBini yeNyukliya kwi-UAE inokusebenza
I-National Nuclear Regulatory Authority yase-United Arab Emirates (UAE) yabhengeza kwinkomfa yabezindaba nge-9 kaMatshi ukuba ikhuphe ilayisenisi yokusebenza kwiyunithi yesi-2 ye-Baraka Nuclear Power Plant, isithi ilayisensi yokusebenza kweyunithi iya kusebenza. kwiminyaka engama-60 ezayo...